I-Geomap Geobide Beta i-3, ikhangeleka ithembisa-i-Geofumadas
I-Geomap Geobide Beta i-3, ibukeka iluthemba
NgoJuni, 2011 Geospatial - GIS
Geomap liqonga entsha yophuhliso oko wayekwazi Tcmap, kakade phantsi indlela edityanisiweyo isicwangciso yequmrhu ingqiqo Geobide Tracsa. Kanye gvSIG, eli phulo liya kuba nomdla kum ukususela wazalwa bume kokufika kunye indlela obuphuma kodwa amaxabiso ngaphakathi scope naphantsi imodeli tiered ukuba mhle.
Abanye xesha eyadlulayo into kwi Kwimihla SIG Mahala de Girona kunye nonyaka nje edlulileyo lokwazisa yohambelwano ngokwayo ukuba zipapashwe njengesisombululo GIS kodwa njengomphathi lwe data zejografi ezisebenza kunye namaqonga CAD ezahlukeneyo isaziso / GIS.
Kumanqaku elizayo siza kubona ezinye izixhobo Geobide, ngoku ndifuna ukugxininisa ukuba ngoxa Geomap Beta 3.0 le nto ndiye ixesha ulivavanye kuba sikhangeleka ezithembisayo njengesixhobo simahla ukubonisa idatha yendawo. Ingaba umbukeli -nangona yenza enye into- ngaphakathi kwenkqubo yesikhokelo yomgca -ngaphandle kwe SDK- Kuquka uhlalutyo, ukwakhiwa nokugcinwa kwedatha kwizixhobo ze-6:
I-Geobuilder. Ngale ndlela unokwakha imifanekiso, i-style iyinobungane kwaye iyafana nendlela epapashwa ngayo yi-ESRI.
Ijoconveter. Le yintsikiti etshayiweyo, kodwa isebenzayo ukuguqula idatha enkulu phakathi kweefomathi ezahlukeneyo; Uncedisa ngaphezu kwe20.
Ukunika umzekelo, kwimeko olwenziwa, abangama-iifayile 115 xyz waba ERTS89 (GB 16 503 yezigidi amanqaku kunye ngeenxa 5 isisombululo imitha) ngendlela yeraster ED50 Bil.
Oku kwenziwa kwimizuzu ye-7, le nkqubo yonke kunye nayo yonke idatha ngexesha elilodwa, ingakhangeli iphepha. Isicelo senza i-triangulation yolwazi nge-algorithm ebizwa ngokuthi "Ukusasaza
Delaunay"Okuvumela ukulawula imimandla emikhulu yedatha phakathi kokubandakanya:
- Ukuguqulwa kweefayile ze-115 XYZ ETRS89 kwiifayile ze-115 LAS ED50 (ixesha
~ 2: iiyure ze-30).
- Ukuguqulwa kweefayili ze-LAS kwifayili enye ye-raster kwifom ye-BIL kunye nobukhulu bepikelel yeemitha ezili-5. (Ixesha ~ 4: 20 ngeeyure).
Kulo nyathelo lokugqibela, zonke iindawo zixhomekeke kwi-TIN (> 503 yezigidi) kwaye enye i-GRID yommandla wonke wendawo isebenza njengeziphumo.
Ijobridge. Oku kukuvumela ukuba usebenze kunye nefomathi zenkqubo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo, njenge-AutoCAD, iMicstation okanye iifayile ze-ArcGIS ngaphandle kokuziguqula kwenye ifomathi. Okumangalisayo kukuba, indlela abaye bafumana ngayo ngefomathi yeV8 apho abanye abaninzi baye bawela khona.
UGeokeck. Ezi zixhobo eziququzelela ukuhambelana kwedatha ngokubhekiselele ekuhlambulukeni kwenkundla kunye nemithetho yokuqinisekiswa kwendawo.
Geotools. Lezi zixhobo eziphambili ezinokusetyenziswa okanye ezicwangciswe kwezinye izinto.
Kwimeko yeGeomap, i-beta yangoku iyakududuza phambi kwezinye iinkqubo. Kodwa kwinto endizame ngayo, ndafumana ezinye izinto ezinomdla.
Eyona nto ifanelekileyo, kunye nomxholo we-suite epheleleyo yiyo ifomathi inkxaso, Ukubandakanya Geomedia, ESRI, Lidar, PostgreSQL, KML, gml, Oracle, WFS, I SQL yam, kuquka neefomathi DGN Microstation V8 ifakiwe.
Kodwa i-Geomap ingaphezulu kwembonisi. Kubalulekile ukuba ngaphandle kokuvula ifayile, ungayithumela kwenye ifomathi, ikuvumela ukuba ulungise iipropati ezifana ne:
Kwimeko yeefayili zenkcazo, khetha i-xyz idilesi kunye nenani lezitshatyalali.
Kwimeko yeefayili ze-dwg / dxf, khetha ukuba ungabamba iibhloko kwaye uphathe iindlovu.
Kwimeko yeefayile ze-dgn, ungakhetha ukuqhuba ezinye iinkqubo usebenzisa i-injini ye-Microstation efakwe, ebonisa apho ifayile yestation.exe ifumaneka khona; ngokuqhelekileyo kwimilayezo engaxhunyiwe kwi-intanethi xa uguqulela kwifomethi yeV7 ekusingatheni iiseli kunye neetekisi. Unokukhetha kwakhona ukuthumela kwi-v7, i-v8, imbewu ye-2d, i-3D kwaye ukhethe i-dgn ekhoyo njengembewu.
Ukuthumela ngaphandle, kukho iinkqubo ezikhethekileyo ezifana nohlobo lwefayile yefayile kwi-dgn, dwg ... efutshane, enhle kakhulu.
Ngokubhekiselele kokuthunyelwa, i-Geomap ikuvumela ukuba ulayishe imibono eyahlukileyo yeGoogle Maps, iBing, Yahoo, i-Open Street Maps kunye ne-Esri Imagery Imephu kunye neStri Imagery Street. Ezi zinokufakwa kwi-synchrony kunye nocingo lwe-vector ukwenzela ukuba xa usondela kwindawo ethile, kunjalo naleyo iyakubonisa. Uluhlu ngalunye lunemihlaba yalo, apho ungachaza iiparameters ezifana umlambo onyanzelisayo, apho umthwalo usebenza kakuhle.
Unako ukulayisha umgca kwisiphakeli seWMS tailed, ukukwazi ukuseka ezinye iindlela zokugcina i-cache kunye nenkqubo yokucwangciswa kwendiza. Kwizahlulelo ze-DEM ungakhetha ukuzithengisa okanye ungenise kwifayile ye .bil
Ifayile igcinwa kwifom .mwd efana ne-ESRI mxd.
Kufuneka uyibone ukuba uyigwebe, kodwa inezixhobo eziziwayo ezizalwe ngokutsha. Njengoko uya kulungelelaniso oluthile, apho kunokwenzeka ukuba ukhethe uhlobo oluthile lwenkcazo kunye nesilinganiselo sokuthunyelwa.
Ekugqibeleni, libukeka li thembisa njengombonisi wolwazi wamahhala. Njengoko ndibonile TatukGIS, kubonakala ukuba le nto ingaba sisixhobo esisisebenzisayo ukubona nokuguqula idatha ngendlela elula, okanye uqhathanise kunye neendlela zeemephu zewebhu.
Nangona i-2.0 inguqu isebenzayo ngokupheleleyo, ndilinde inguqu eqinile yale 3.0; kukho umsebenzi omele wenziwe ekulungiseni uchungechunge bugs eziqhelekileyo kwiinguqulelo ze-beta. Kubonakala ngathi i-GDI isebenza kwimephu yesiseko ingahanjiswa ngaphandle, ngoku iqalise impazamo yokuhlambalaza. Emva koko siza kufuneka sibone ukuba yintoni umphathi we-geoprocessing manager, obonakala ukuba avumele ukudala nokugcina i-geoprocesses kwifom .gpf.
Uncedo lufutshane, ngokuba akukho zikhokelo ezikhoyo okwangoku.
Khuphela i Geomap
Post edlulileyo«Edlulileyo Yakha intambo kunye ne-Global Mapper
Post Next BiblioCAD, khuphela i-AutoCAD ibhloko kunye nezicwangcisoOkulandelayo "